Ny fomba fiaina mihitsy araka izany no mila ovaina hoy dokotera Fidy Bariniaina ao amin’ny Clinique Fidy etsy Ambatomainty. Mila miomana foana hoy izy ny olona iray fa na dia ny olona akaiky azy aza dia mety ho salama nefa mitondra ilay tsimok’aretina. Ilaina mandrakariva araka izany hoy izy ny manao aron-tava hiarovana ny mikraoba tsy hiditra eo amin’ny vava sy ny orona. Ny tanana ihany koa hoy izy tsy tokony hikasika ny vava na ny orona satria iny tanantsika no mety hampiditra mikraoba any anaty, indrindra raha nikasika zavatra nokasian’olona marary. Tsy mifampiarahaba sy tsy mifandray tanana intsony ihany koa aloha hoy dokotera Fidy na dia fahalalam-popmba bitika aza izany ary hajaina foana ilay elanelana 1 metatra. Mikasika ny vatana manokana dia tokony ho ampy torimaso hatrany ny tsirairay. Ora valo isan’andro no andrasana ho an’ny tsirairay ary raha sanatria ka misy aza ny fiaretan-tory tsy maintsy natao dia ezahina ny manonitra izany amin’ny atoandro. Tokony ho ampy protein ihany koa ny vatana toy ny hena, ny trondro, ny atody, ny soja. Tsy hatao ambanin-javatra ny sakafo misy hery fiasana izay manone hafanana toy ny vary, ny hanin-kotrana, mofo misy lafarinina. Ary farany ny fampitomboana ny fihinanana voankazo sy legioma. Mikasika ny trano manokana dia tokony hadio lalandava izany, azon’ny rivotra sy masoandro hahafahana mamono ilay mikraoba tafiditra.